Grow Taller Exercises Book in Myanmar | Thaing Wizard
Yoga Book in Myanmar
Yoga Book in English
Martial Arts Books in Myanmar
Martial Arts Books in English
Bodybuilding Book in Myanmar
Bodybuilding Book in English
Grow Taller Exercises Book in Myanmar
Grow Taller Exercises Book in English
Where To Train?
၁။ အရပျရှညျထှကျ မွငျ့တကျဖို့ (မငျးစံအိမျ)
အရပျရှညျထှကျ မွငျ့တကျဖို့ (မငျးစံအိမျ)
Download (File Size – 23 MB)
၂။ အရပျရှညျထှကျ ဖွောငျ့မတျတကျဖို့ (မငျးစံအိမျ)
အရပျရှညျထှကျ ဖွောငျ့မတျတကျဖို့ (မငျးစံအိမျ)
Download (File Size – 35 MB)
၃။ ၁၄-ရကျအတှငျး အရပျရှညျနညျး (ထိပျတငျထှဋျ)
၁၄-ရကျအတှငျး အရပျရှညျနညျး (ထိပျတငျထှဋျ)
Download (File Size – 4.19 MB)
၄။ အရပျမွငျ့မားစဖေို့ ယောဂကငျြ့စဉျ (ဝဇီရ)
အရပျမွငျ့မားစဖေို့ ယောဂကငျြ့စဉျ (ဝဇီရ)
Download (File Size – 226 KB)
၅။ အရပျရှညျလိုသူ လူငယျမြားအတှကျ လမျးညှနျပေးပါရစေ (မောငျမိုးဆောငျး-ဒိုကျဦး)
အရပျရှညျလိုသူ လူငယျမြားအတှကျ လမျးညှနျပေးပါရစေ (မောငျမိုးဆောငျး-ဒိုကျဦး)
Download (File Size – 216 KB)
23 thoughts on “Grow Taller Exercises Book in Myanmar”
grow taller4idiots review on September 30, 2013 at 11:10 pm said:
hey thanks for this wonderful publish. Will be sharing your web site quickly..thanks
saetamann on November 13, 2013 at 2:24 am said:
grow taller 4idiots နိုင်​ငံခြားWebsideက​တောင်​အ​လေးထားတာဂုဏ်​ယူဖို့​ကောင်းပါတယ်​အကို…ကျ​တော်​အခု5’5”​ရောက်​​နေပါပြီ…ဒါ​ပေမယ့်​အရပ်​ထပ်​မထွက်​​တော့ဘူးဖြစ်​​နေပါတယ်​…ကျ​တော်​ထပ်​ရှည်​လာနိုင်​ပါ့မလား…ကျ​တော်​​ဆေးလိပ်​နည်းနည်း​တော့​သောက်​ပါတယ်​…အကြံ​ပေးပါဦး…ပြီး​တော့​ပေါင်​အပြင်​ဘက်​သားကြီးချင်​ရင်​ဘယ်​လိုကစားသင့်​ပါသလဲ…အ​လေးမတာနဲ့အရပ်​ရှည်​နည်းတွဲကျင့်​ရင်​အဆင်​​ပြေနိုင်​ပါသလား…​ကျေးဇူးအများကြီးတင်​ပါတယ်​…
Aung Thu Htet on November 13, 2013 at 11:34 am said:
ဟုတ်။ ယောက်ျားလေးများဟာ အသက် ၂၅-နှစ်လောက်အထိ အရပ်ရှည်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါက တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အရိုးအဆစ်ကို ပြောတာပါ။ အသက် ၂၅-နှစ်ကျော်သွားသူ လူကြီးပိုင်းများမှာကျ ခြေထောက်ကဲ့သို့ နေရာတွေ ထပ်ရှည်မလာတော့ပေမယ့် ကျောရိုးဆစ်တွေကို ရှည်လာအောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ အရပ်ရှည်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ကာယဗလလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်သူများဟာ ဆေးလိပ်၊ အရက်နှင့် အမြန်စာ (Junk Food) များကို မစားသင့်ပါဘူး။ မရှောင်နိုင်ရင်တောင် လျှော့စား၊ လျှော့သောက် ရပါမယ်။
နောက်တစ်ခုက အလေးမသူများ အရပ်ရှည်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် နည်းပြကောင်းနဲ့ တွေ့ဖို့လိုပါတယ်။ ကစားနည်းစနစ်ကျဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အရပ်ရှည်နိုင်တယ်ဆိုရာမှာ မွေးရာပါ မျိုးရိုဗီဇရှိသလောက်ထိ ရှည်နိုင်တာကို ပြောတာပါ။ အလေးမလို့ အရပ်ပိုရှည်နိုင်တာမှန်ပေမယ့် မျိုးရိုးဗီဇရှိတာထက် ပိုရှည်ချင်ရင် အရပ်ရှည်လေ့ကျင့်ခန်း သီးသန့်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အရပ်ရှည်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အလေးမတာနဲ့ကို တွဲမလုပ်စေချင်ပါဘူး။ အလေးမတာက အရိုးကို သိပ်သည်းစေပါတယ်။ သို့သော် မျိုးရိုးဗီဇထက် ကျော်လွန်မြင့်မားလိုသူများအတွက်ကတော့ နှစ်ခုတွဲလုပ်ရင် သိပ်အဆင်မပြေနိုင်ပါ။
ပေါင်ကြွက်သားတက်ဖို့ကတော့ အောက်မှာ အကြံပြုထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း လေးမျိုးကို တစ်ပတ်ကို တစ်ရက်ကစားပေးပါ။ https://thaingwizard.wordpress.com/2013/10/15/mini-home-workout/ မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကစားနည်းနဲ့ တွဲစပ်ပြီး ကစားကြည့်ပါ။ နှစ်လလောက် ကစာကြည့်ရင် သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
1. Side Lunges – ဘေးတိုက်ထိုင်ထ (ပေါင်၊ တင်ပါး)
2. Bulgarian Split Squats – ခြေတစ်ဖက်ခုံပေါ်တင် ခြေတစ်ဖောင်ရိုးထိုင်ထ (ပေါင်၊ တင်ပါး)
3. Squats – ရိုးရိုးထိုင်ထ (ပေါင်၊ တင်ပါး၊ ကျောအောက်ပိုင်း)
ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ပခုံးအကျယ်ထက်ပိုခွဲထားပြီး၊ ခြေဖျားများကို အတွင်းဖက်သို့ လှည့်ထားပြီး ကစားပါက ပေါင်ပြင်သားကို ထိစေမည်ဖြစ်သည်။ ခြေနှစ်ချောင်းကို နီးကပ်စွာဖြင့်ထားခြင်း၊ ခြေဖျားများကို အပြင်ဘက်သို့ လှည့်ထားခြင်းက ပေါင်တွင်းသားကို ထိစေမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အတိုင်း ပုခုံးအကျယ်တိုင်းခွဲ ကစားပါက ပေါင်းတွင်းသားရော၊ ပေါင်ပြင်သားပါ ညီမျှစွာထိမည်ဖြစ်သည်။
4. Calf Raises – ခြေသလုံးကြွ (ခြေသလုံး)
ဒါက ဖော်ပြပါ ကစားနည်း လေးမျိုးအတွက် သရုပ်ပြပုံပါ။
saetamann on November 14, 2013 at 11:20 pm said:
Aung Thu Htet on November 15, 2013 at 2:44 pm said:
ခြေထောက်ရှည်လာစေဖို့ကတော့ https://thaingwizard.wordpress.com/grow-taller-exercises-book-in-english/ မှာ အင်္ဂလိပ်လို အရပ်ရှည်နည်း စာအုပ်တွေ တင်ထားတာရှိပါတယ်။
ဂုတ်သားတက်ဖို့က https://thaingwizard.wordpress.com/2013/10/15/mini-home-workout/ မှာ တင်ထားတဲ့ အထဲက နံပါတ်-၂ လေ့ကျင့်ခန်း (Military Press) ကို လုပ်ပါ။ ဆုံဂုတ်သား၊ လက်မောင်းနောက်သားနဲ့ ပခုံးသားတွေအတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။
Zay Khant on May 26, 2014 at 10:40 pm said:
pyaephyo on October 6, 2017 at 6:39 pm said:
ခြေသလုံးပေါင်တံ ရှည်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေး တင်ပေးပါဦး ခင်ဗျ
Chan Nyein on July 20, 2014 at 6:19 pm said:
ကျွန်တော် ခြေသလုံးအရမ်းသေးပါတယ် အသက်လည်း 25 နှစ်ရှိပါပြီး အရပ်က 5’10” ရှည်ပါတယ် ခြေသလုံးတွေသေးလွန်းလို့ ဘောလုံးတောင်မကန်ရဲ ဘောင်းဘီတိုမ၀တ်ရဲဖြစ်ရပါတယ်
ခုအချိန်မှ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် အကျိုးရှိပါအုံးမလားခင်ဗျာ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ရမလဲဗျ
Aung Thu Htet on July 23, 2014 at 9:06 am said:
ခြေသလုံးကြွတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ကစားပေးပါ။ ဒီမှာ https://thaingwizard.wordpress.com/2013/10/15/mini-home-workout/ တင်ထားတဲ့ စာအုပ်မှာ ပါပါတယ်။ Calf Raise ကို ပြောတာပါ။ အဲ့ဒီမှာ တင်ထားတဲ့ အောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်း သုံးမျိုးစလုံး (Squats, Lunges & Calf Raises) ကို ကစားနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
anonymous on July 28, 2014 at 1:01 am said:
ဟုတ်ကဲ့ ဒီလိုအရပ်ရှည်ဖို့ လေ့ကျင့်မှုတေ ပြုလုပ်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာပေါ့လေ
ကျနော်တို့လူငယ်သဘာဝ အာသာဖြေခြင်းကြောင့် ထွက်သွားတဲ့ သုတ်တွေဟာ အရပ်ရှည်ထွက်ခြင်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသလား သိချင်ပါတယ် လေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်းမှာ အာသာဖြေခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသလား
Aung Thu Htet on August 1, 2014 at 4:05 pm said:
အလွန်အကျွံမဟုတ်ရင် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ရပါတယ်။
Sai Min Khant on November 3, 2014 at 4:49 am said:
ကျွန်တော့်အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ ပေါင်တံရှည်လိုပါသေးတယ်။၃လက်မလောက်ရှည်ချင်ပါသေးတယ် ထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း လေးများကို လမ်းညွှန်ပေးပါဗျာ။အရပ်ရှည် ပေါင်တံ ရှည်တဲ့သူမြင်တိုင်းအရူးအမူးအားကျမိပါတယ် ။ကျေးဇူးပြု၍လမ်းညွှန်ပေးပါဗျာ။။
kaung kaung on November 23, 2014 at 12:49 am said:
swan on January 23, 2015 at 8:54 am said:
အကိုကျွန်​​တော်​အရပ်​ရှည်​နိုင်​​သေးလားအခုကွန်​​တော်​အသက်​ 16 နှစ်​ရှိပါ အခု ငါး​ပေ တစ်​ဆယ်​​လောက်​ ရှိပါတယ်​
swan on January 23, 2015 at 8:56 am said:
TenHtike Nail on March 19, 2015 at 3:34 pm said:
grow taller4 idiots က ပြည်တွင်းဘယ်နေရာမှာရနိုင်ပါလဲ
Rbee Jgdgkk on June 6, 2015 at 2:23 pm said:
၁၄ရက်​ အရပ်​ရှည်​ နည်းပြထာတဲ့​လေ့ကျင့်​ခ​န်​အားလုံလုပ်​ရမလာအစ်​ကို
lu pyo on August 12, 2015 at 11:09 pm said:
အကို ည ဘယ်​အချိန်​​လောက်​အိပ်​သင့်​လဲ ၉နာ၇ီ၁၀နာ၇ီလား? ကျွန်​​တော်​ကည၁နာ၇ီ၂နာ၇ီ​လောက်​မှအိပ်​ပါတယ်​ အိပ်​​ချိန်​၈နာ၇ီ​လောက်​အိပ်​မှဝပါတယ်​..အိပ်ေ၇းမ၀တာ​တော့မဖြစ်​ပါဘူး ၀ ၀ အိပ်​ပါတယ်​…ညအဲ့အချိန်​​လောက်​မှအိပ်​၇င်​ အ၇ပ်​ရှည်​တာကိုထိခိုက်နိုင်​ပါသလား ခင်​ဗျာ?
Liam Harrizz on January 26, 2016 at 1:07 pm said:
ည၁၀နာရီက​နေမနက်​၄နာရီအချိန်​ကကြီးထွား​ဟော်​မုန်းစိမ့်​ထွက်​တဲ့အချိန်​ပါ။၁၀နာရီ အိပ်​တာအကျိုးပိုရှိပါတယ်​ တစ်​​နေ့ ၈နာရီ​လောက်​အိပ်​​ပေးပါ အိပ်​ချိန်​၈နာရီ ထက်​များရင်​လည်းမ​ကောင်းပြန်​ပါဘူး။
Liam Harrizz on January 26, 2016 at 1:09 pm said:
Mg Eant Chyu on January 21, 2016 at 1:44 pm said:
hello. Sayar I´m very short amomg my friends.
Please give me some advice to me.Now I´m the age of 18. With thanks.
Htet Arkar Naing on May 8, 2016 at 10:07 pm said:
GYM နဲ့အရပ်​ရှည်​​လေ့ကျင့်​ခန်းတွဲ​ဆော့ရင်​အ​ဆင်​​ပြေနိုင်​လား ?
ည​နေပိုင်းက​တော့ GYM ​ဆော့ပါတယ်​
lynnhtetkyaw on December 3, 2017 at 8:25 pm said:
ညီက ခု ငါးပေ နှစ်လက်မ ပဲရှိတယ် အသက်က ဆယ့်ရှစ်နှစ်ရှိပြီ
အရပ်ရှည်ချင်လို့ လေ့ကျင့်ခန်းလေး လမ်းညွန်ပေးအုန်း
LeaveaReply to swan Cancel reply
Archives Select Month June 2017 (1) February 2015 (2) January 2015 (3) December 2014 (3) March 2014 (6) February 2014 (3) November 2013 (3) October 2013 (3) July 2013 (2) June 2013 (1) May 2013 (4) April 2013 (4) March 2013 (6) February 2013 (6)
Thaing Wizard မှာ post အသစ်တင်တိုင်း သိလိုလျှင် e-mail လိပ်စာထားခဲ့ပါ...
Burmese Martial Arts UK
International Thaing Byaung Byan Association
Lethwei (Myanmar Boxing)
Muscle Professor Myanmar
Myanmar Aikikai New Organization
Myanmar Fitness Game
Myannmar Thaing Federation
Nan Su Kay Swan Yoga
Suriyath San Yoga
Thaing Byaung Byan (Mandalay)
Martial Arts Book in Myanmar
Martial Arts Book in English
EnglishYoga Book in English